10 | November | 2020 | QEERROO
Loogummaan osoo hinbarbadaa’in nageenyi hinargamu!
Posted on November 10, 2020 by Qeerroo
namaa bilisa ta’ee dhalate. Tokko garbicha ta’ee, tokko mootii ha ta’uuf hinuumamne. Afaan saba tokkoo afaan aangaa’ota biyyattii ta’ee, afaan saba tokkoo ammoo jibbamaa akka ta’uufis hinuumamne.
Biyya Impaayeraan ijaaramte keessatti garuu; loogummaa akkanaatu hammaata. Saba tokko saba mootii taasisanii, saba isa kaan ammoo garbicha taasifachuutu jira. Impaayera kan jedhamuufis kanaafi. Impaayera jechuun mootolee loogummaan guutamaniif biyya loogummaan liqimfamtedha. Biyyuma bulchan keessatti sabuma bulchan tokko jaallatanii tokkoof bakka dhabuutu amala mootolee impaayera bulchaniiti.
Xoophiyaan impaayera malee biyya miti. Impaayera Xoophiyaa kana keessatti sabni Amaaraa akka saba Waaqaatti, akka saba qulqulluutti fakkeefamaa as gahe ittis jira. Impaayera afaan Qawween hundoofte Xoophiyaa keessatti loogummaan sabaaf loogummaan aafanii, loogummaa aadaaf loogummaan seenaa walii gala Loogummaan Ashaaraa saba tokkoo dagaagee mul’ata.
Ashaaraa saba tokkoo kan ta’e: Aadaa, Afan, Eenyummaa, Seenaa fi qabeenyaa addatti sabichi qabu yoo ta’u isaan kana irratti qaamoleen nuti mootummaadha jedhan gama saba isa tokkoo goranii kan saba isa kaanii xiqqeessuu fi kineessuu irratti dalagu.
Impaayera Xoophiyaa keessatti saboota adda addaa 80 ol ta’an keessaa kanneen 76 ol ta’an jibbamanii kanneen hidda Sem ta’an qofatu leellifamaa fi akka saba qulqulluutti ilaalamaa as gahe ittis jira.
Keessattuu hacuuccaan daanga maleessa ta’e saboota Kuush irratti qiyyaafatee jaarraa tokkoo oliif irree abbootii aangoon gadi qabamaa as gahameera.
Ashaaraan saboota Kuush akka waan maayii hinqabnee ykn akka waan hojii seexanaa fi jibbamaa ta’eetti fudhatamee barsiifamaas as gahe. Kun ammoo daranuu loogummaan sanyii akka babal’atu taasise.
Raise money for International Qeerroo Support Group Tax Exempt Charity
Waamicha Fincila Xumura Gabrummaaf godhame
Jaafar Yusuuf waajjira poolisii Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti kan hidhamee jiru yoo ta’u, reebicha isarratti raawwatameen ol jedhee dhaabbachuullee hin danda’u jechuun hiriyaan isa OMN-tti hime.